BBC Somaali oo Qabanaysa Tartanka Gabayada Dumarka Da’da Yarta – Radio Daljir
BBC Somaali oo Qabanaysa Tartanka Gabayada Dumarka Da’da Yarta
Maajo 22, 2018 9:44 g 0
Waxaa furmay qabashada araajida tartanka gabayada laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da. Waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo la qabto tartankan oo lagu magacaabo Tartanka Gabayga ee Dumarka Da’da Yar ee BBC News Somali 2018<http://www.bbc.com/somali/war-44136890>, wuxuuna u furanyahay haweenka da’dooda u dhaxayso 16 illaa 35 jir, iyada oo laga doonayo hal abuur gabay ay iyagu asal ahaan u leeyihiin oo ku qoran Afka Soomaaliga.
Waxaa gabayada lagu soo gudbin karaa e-mail-ka ah [email protected]<mailto:[email protected]> ama khaanadda ka furan bogga<https://bbc.lvis.io/bbcsyfp/> BBC Somali. Sidoo kale faahfaahinta shuruudaha looga qeybgali karo tartanka waxaa laga heli karaa halkan<http://www.bbc.com/somali/war-44136890>.
Madaxa laanta Afka Soomaaliga ee BBC-da, Cabdullaahi Cabdi Sheekh ayaa yiri “Waxaan ku faraxsanahay in aan halkii kasii wadno abaalmarinta, taas oo markii koobaad la bilaabay sannadkii hore, iyadoo ay caddaatay in aad loo daneynayay, oo illaa 100 qof ay soo dirsadeen arjiyada ka qeybgalka tartanka, ujeedkuna ahaa in dhagaystayaasheena loogu soo bandhigo codad cusub iyo gabayo tayo leh. Hal abuurka dumarka Soomaaliyeed – haddii ay ahaan lahayd ciyaaro dhaqameedyada ama isticmaalka luuqada- ayaa ah arrin aad iyo aad loo bogaadiyo. Abaalmarinta BBC-da waxa ay soo bandhigeysaa dhaqanka gabayada ee dumarka ku hadla Afka Soomaaliga meel kasta oo ay joogaan, inaga oo siinayna fursad ay kusoo gudibiyaan kartidooda iyo hibooyinkooda”
Rachael Akidi Okwir, oo ah madaxa Afafka kala duwan ee BBC Bariga Afrika ayaa tiri iyaduna “dhawaan umbay ahayd markii ay BBC-du samaysay toddobaadka dumarka, taas oo aan ku soo bandhignay dumarka Soomaaliyeed ee guulaha waaweyn ka soo hoyay ganacsiga. Abaalmarintanna waxay nagu caawin doontaa inaan aqoonsanno codad cusub oo gabdhaha gabya ah. BBC-da waxaa ka go’an in codkeeda uu gaaro dumarka, tallaabadan waxay muujineysaa in BBC News Somali ay hormuud ka tahay hiigsigaasi”